« Previous Next » May 31, 2012 चुनावका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीको पहल १८ जेठ, काठमाडौं । संविधानसभाको चुनावका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पहल थाल्नु भएको छ ।
सहमतिको प्रयासमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले आज साँझ एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई भेट्दै हुनुहुन्छ । खनाललाई भेट्न प्रधानमन्त्री भट्टराई साँझ ७ बजे उहाँकै निवास डल्लु पुग्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले बिहान राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग टेलिफोटमा वार्ता गर्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकार कामचलाउ भएको भन्ने राष्ट्रपतिको बक्तव्यलाई आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको भन्दै आफू राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन प्रयासरत रहेको बताउनु भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासँग पनि टेलिफोन वार्ता गर्नु भएको छ । प्रतिक्रिया पठाउनुस्